Nkwado ndị a ma ama bụ nhọrọ Nhọrọ A Ga - enwe? | Martech Zone
A hụwo mgbe a na-akwado Celebrity Endorsement dị ka nhọrọ dị mma maka ụlọ ọrụ iji kwalite ngwaahịa ha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ kwenyere na ngwaahịa ha metụtara onye ama ama ga-enyere aka ịre ahịa. Ndị ahịa na-ejighị n'aka na ha nwere mmetụta na 51% na-ekwupụta na nkwado ndị a ma ama emeghị obere ihe ọ bụla na mkpebi ịzụta ha.
Ọ bụ ezie na ROI n'ọtụtụ usoro ịzụ ahịa nwere ike ịba uru - ROI na nkwado ndị a ma ama nwere ike isiri anyị ike ịchọpụta. Enwere ọtụtụ elele nwere ike ijikọ na nkwado ndị a ma ama mana enwekwara ọtụtụ ọghọm enwere ike iji nlezianya nyochaa.
Enwere ọnyà ndị a mgbe ị dabere naanị otu onye ama ama iji kwalite ngwaahịa gị. Ulo oru ulo oru gi nwere ike di n’aka otu onye onye onyonyo ya nwere ike igbanwe abali abali n’ihi ihe ojoo ojoo. Ọ bara uru n'ezie itinye ihe egwu a?
N'ihi nke a, ihe ịga nke ọma nke nkwenye ndị a ma ama na-adịgasị iche iche ma ọ bụ eziokwu banyere ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ na ndị ọzọ. Mkpa ọ dị ịhọrọ onye a ma ama kwesịrị ekwesị bụ nke kachasị mkpa iji belata ihe ize ndụ nke mgbasa ozi na-adịghị mma maka ụlọ ọrụ gị. Okwesiri iburu n'uche na enweghi ike imebi ihe egwu di na nkwenye nke ndi amara kpamkpam, ma imeghachi omume na-adighi nma site na nkwado ndi amara bu ihe kwesiri ka ejiri nlezianya dozie ya.
Ihe omuma a site na Banye A Rama Toronto na-enye gị ọnụọgụ banyere etu esi akwado nkwado ama ama, yana akụkọ n'azụ nkwado akwadoro nke ọma na afọ ojuju n'ime afọ niile.
Tags: beyonceugbo britneycatherine zeta jonesnkwanye ugwu nkwado infographicnkwanye ugwu nkwanye ugwuewu ewu na nkwenyenkwanye ugwu ndị ama amadavid beckhamDonald opiellen degenereskardashiansNicole Kidmannielsenoj simpsonrihannasignaramasignoramatoronto